“Ithuba lokuqeqesha iqembu engilinikwe usihlalo weqembu uFarouk Kadodia angikalikholwa futhi ngiyabonga kakhulu. Phela selokhu ngaqala ukuqeqesha kuyaqala ukwenzeka lokhu empilweni yami.
“Phela iningi lamaqembu engisebenze kuwona bengiba umsizi womqeqeshi (assistant). So ja kuzoba yinselelo enkulu,” kusho uNcikazi obengumsizi kaKomphela kuleli qembu.
Noma ukuba yikhanda labaqeqeshi (head coach) kuzoza nezingqinamba nezinselelo eziningi uNcikazi uthi yena akasabi.
Usihlalo weTeam of Choice uFarouk Kadodia uthi umqeqeshi omusha ubhekeke ukuba aqhubeke nevangeli noma inqubo eyatshalwa uKomphela, uma kwenzeka kube nenkomishi eza eMphithi.
“Singajabula ukumbona eqhubeka nomsebenzi omuhle owaqalwa uSteve Komphela.
“Ngesizini edlule sikwazile ukubambelela nokuqeda kwitop 8 nesingakuthanda ukukubona kwenzeka futhi.
“Kanti nelinye iphupho lethu esingalithanda lifezeka ukuwina indebe ngelinye ilanga. Kodwa-ke mangisho ukuthi asifuni ukubona uNcikazi esebenze ngaphansi kwengcindezi.